တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Huawei C8813 လိုင်းပျောက်သွားရင်...
ကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းနဲ့ လိုင်းပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Unlock bootloader နဲ့ root ထားဖို့လိုပါတယ်
အရင်စပြီး Root ကြမယ်
unlock code ကိုအရင်တောင်းပါ.. Click Here
Marking ပေးပြီး အနီရောင် button လေးကို click လုပ်ပါ
1. ကိုယ် သုံးတဲ့ Email ကိုထည့်ပါ unlock code ပို့ရင်လက်ခံမလို့ပါ... ဖြစ်နိုင်ရင် email သုံးခုလောက်နဲ့ပို့ပါ။
2. down arrow ကိုဆွဲချပြီး ဒုတိယ စာကြောင်းကိုရွေး..
3. ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ဖုန်း အမျိုးအစားကိုရွေးပါ..
4. Serial Number (ဖုန်း battery ဖြုတ်ပြီးဖုန်းနောက်မှာကြည့်ပါ)
5. IMEI or MEID (Sim card နှစ်ကဒ်သုံးဖုန်းတွေဆိုရင် MIED ကိုထည့်ပါ.. GSM တစ်ကဒ်သုံးဆိုရင်တော့ IMEI ကိုထည့်ပါ.. ဖုန်း battery ဖြုတ်ပြီးဖုန်းနောက်မှာကြည့်ပါ)
6. Product ID (နံပါတ်ရိုက်ပြီးဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာမှာ *#*#1357946#*#* လို့နှိပ်လိုက်ရင် Product ID ပေါ်လာပါတယ်...
7. အားလုံးပြီးရင်တော့ အနီရောင် button ကိုနှိပ်ပါ..
နော်ထပ်အနီရောင် button တွေပေါ်လာရင်ထပ်နှိပ်သွားပါ..
အရေးကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ. အပေါ်ကပြောတဲ့အတိုင်း S/N နဲ့ IMEI or MEID ကိုဝင်ရိုက်တာပဲ ဒါပေမဲ့ No.7 ကိုနှိပ်တာနောက်တစ်မျက်နှာမသွားပဲ error တက်နေတတ်ပါတယ်.. အဲဒါက IMEI or MEID မှားနေလို့ပါ... ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာမှာ *#06# ကိုရိုက်လိုက်ရင် IMEI or MEID ပေါ်လာလိမ့် အဲဒီ နံပါတ်ကိုထည့်ပေးပါ... အဆင်ပြေသွားလ်ိမ့်မယ်
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် unlock code ပို့တာ china site ကပို့တာပဲကောင်းပါတယ် english version site ကပို့ရင် C8813 မရှိဘူးဗျ..
Unlock Code ပြန်ရဖို့ ၃ ရက်လောက်တော့စောင့်ရတယ်
Code ရရင် Unlock Bootloader နဲ့ Root စကြမယ်..
အရင်ဆုံးဖုန်းထဲက setting ထဲမှာ USB Debugging ON
Fastboot Mode ကို OFF ထားပါ...
ဖုန်းပိတ်ပြီး fastboot mode ထဲကိုဝင်ပါ
Fastboot Mode>>>>> VOLUME DOWN + POWER <<<<< 10 seconds လောက်ဖိထားပါ..
Huawei logo မှာရပ်နေလိမ့်မယ်...
ဒါဆို computer နဲ့ connect လုပ်ပါ..
computer ပေါ်က unlock tool ကို open လိုက်ရင်...
အပေါ်ကလိုပေါ်လာမယ်.. xxxxxxxxxxxxxxxx နေရာမှာ email ကလက်ခံရရှိတဲ့ code ကိုထည့်ပြီး enter ပဲနှိပ်သွားပါ..
တစ်ခုတော့ရှိတယ် unlock လုပ်ရင် ဖုန်းကို factory reset ပါ တစ်ခါတည်းလုပ်တော့ အရင် backup ဆွဲထားတာပိုကောင်းပါတယ်....
unlock လုပ်ပြီးဖုန်းပြန်တက်လာရင် ထုံးစံအတိုင်း fastboot OFF / USB Debugging ON ပြီးဖုန်းကိုပြန်ပိတ်ပါ
ဒေါင်းထားတဲ့ဖို်င်တွေထဲက C8813root.zip နဲ့ NetworkDiscovery-0.3.4 ကို SD card ထဲထည့်ပြီးဖုန်းထဲကိုထည့်ထားပါ
ပြီးရင် fastboot mode ထဲကိုပြန်ဝင်..computer နဲ့ပြန် connect လုပ်...
OneKey Tool ကိုဖွင့်ပါ..
Bootloader recovery ကို နှိပ်ပါ...သူဘာသာ install လုပ်ပြီး recovery mode ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်..
recovery mode ထဲကိုသူဘာသာမရောက်ရင်
ဖုန်းကိုပိတ်ပြီး >>>>>VOLUME UP + POWER<<<<< ဖိထားရင် recovery mode ထဲကိုဝင်..
Choose Zip for SD ထဲက C8813root.zip ကို install လုပ်ပါ..ပြီးရင် NetworkDiscovery-0.3.4.zip ကိုထပ်ပြီး install လုပ်ပါ.
ပြီးရင် reboot လုပ်ပါ...